Paartiin “qubattootaa fi dallaalota lafaa” ብልፅግና jedhamtu meeshaa duula filannoo isheen qopheeffataa jirtu hubattanii ilaaltaniittuu? - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsPaartiin “qubattootaa fi dallaalota lafaa” ብልፅግና jedhamtu meeshaa duula filannoo isheen qopheeffataa jirtu hubattanii ilaaltaniittuu?
Kaadiroonni OPDO-ODP gameeyyiin paartiin isaanii baqee utuu hinbadin Afaan Oromoo afaan hojii dabalataa mootummaa federaalaa akka taasisuuf kadhataa ba’an. Abiy Ahmedii fi Nafxanyoonni garuu yaada kaadiroota isaan waliin dadhabaa ba’anii diduudhaan erga ብልፅግና taanee booda Afaan Oromoo afaan hojii dabalataa goona malee utuu OPDO-ODP baqsinee hinballeessin akkas hingoonu jedhanii didan. Kun kaayyoo fi tooftaa mataa ofii danda’e irra dhaabbatee kan murtaa’e ture.
Yoo OPDO-ODPn utuu hinbadin Afaan Oromoo afaan hojii dabalataa mootummaa federaalaa taasise ብልፅግናn waan qabatee Oromootti dubbatu homaa waan hinqabneef isa kana qabsiisa godhatanii harkatti hambifatanii jiru. Akkuma beekamuNafxanyoonni akka Abiy waa’ee mirga abbaa biyyummaa Oromoo tasumaa hubachuu waan hindandeenyeef ykn beekamtii kennuu waan hinbarbaanneef uummanni Oromoo gaaffiin isaa waa’ee Afaan Oromoo kana qofa jedhanii amanu. Sirumaa Afaan Oromoo malee sabni Oromoo jedhamu hinjiru jedhu.
Faallaa ‘expectation’ namoota baa’ee hojii ብልፅግናn filannoo jala geessee ykn battala filannoo boodaa hojjechuu barbaaddu Afaan Oromoo afaanota biyyattii afur kanbiraa waliin afaanota dabalataa afaan hojii mootummaa federaalaa taasisuudha. Isa kana immoo agartan yoota’e yeroo hundeeffama ብልፅግና labsan irraa kaasanii qarqara qarqara adeemanii dubbataa jiru. Abiy Ahmedis Afaan Oromoosaa caccabaa አማርኛn adda hinjirre sanaan rakkatee waan tokko tokko FB irratti barreessaa jira, gaaf tokko tokkommoo Oromoota galtuu kadhatee barreessifata. Inni kun Oromoo fi burjaajessinee bifa Nafxanyummaa dhokfachuuf nugargaara jettee yaaddi.
Akkasitti yeroo bitachaa, humnas horachaa malaan Oromiyaa diigdee, federaalizimii sabdaneessaa biyyattiis mancaasuuf deemti. Paartiin “qubattootaa fi dallaalota lafaa” Abiy hundeesse paartii Nafxanyootaa fi diinota Oromooti. Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa gochuu mitii Oromiyaa keessallee yoo warqee afte Oromiyaa balleessuuf malee gargaaruuf akka hintaane sirriitti beekamuu qaba. ብልፅግናn filannoo duras ta’e isaan booda Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa fedraalaa taasiftee kan labsitu taanaan Oromoon GALATA DHABI jedhee tarkaanfii ofii ittifufuutu irra jira. #Abiy_Must_Go
Duula sirni ADWUI /Epp /pp hayyoota keenyarratti fi qerroof qabsaa’ota oromoo irratti bante kana fagessinee yoo xiinxallee jiraanne waan akka salphaatti irra darbuu hin qabnedha.Holollii isaa yeroo yeroon ajandeffatanii ka’ani Hayyoonni oromoo aangoo barbaadu Bilisummaan isaan fedhan gaafa aangoo qabatani kan jedhu qabatanii ballinaan i holluu erga jalqabani bubbulanii jiru.otuma dhuguma aangoo yoo fedhan ta’e dhuguma enyutu isaan dhorka?dandettii beekkumsaatiniis hayyummatinis quuqamummatinis opdo barnoota hin qabne sabbponummaa kan hin qabne sammuun duwwaa kana dachaa kuman jimlaa isii yoo caalan male isaani qixaa miti. Akka isaan dubbachaa jiranitti kanatti hayyoonni keenya Mirga aangoo qabtanii saba isaanitiif tajaajiluu hin qabanu jechuudhaa?
Kalessa woggoota shanan duratti fakkaattonni akka isaanifi sirni isaanii hayyoota oromootiif Qeerroo oromootirraan holola baayye gaggessaa bahan.maallaqa biliyoonaan ramadanii midiyaalee ummataa cufuuf sagalee qeerroof ummataa ukkaamsuuf dhakaa danda’an Hunda fonqolchaa turan.humna woraana agaazii hamma fedraalaa polisii oromiyaa hamma gandaattii caasaa isaaniif tika isaanii ramadanii Qerroo kumaaatamaan ajjessanii kumaatamaan hidhaatti guuraniii ,hayyootaaf Qabsaa’ota kaan biyyoo kaan Biyaa baasanii kaan immoo hidhaatti naqanii daraaruun qabsoo mirgaaf bilisummaa sabaa duubatti deebisuuf yaalii danda’anu Hunda godhanii turan ,qabsoon oromoof qerroof Qabsaa’ota oromoo akka isaan yaadanitti Osoo hin taane gar_gaarsa rabbiitiin ittuu finiinee jabaataa dhufe male boodatti hin deebine.boodarra dirqamanii kan ajjessan ajjessanii,kan buqqasani buqqaasanii, dirqmaan dhiibbaa qabsootiin hidhamtoota siyasaaf dhaabbilwwan biyyatti
galchan.kana booda dhiifama jedhanii dhibba qabsoo oromoo isaan dirqee taayitaa irra isaan raase irranfatani nutu fedhii keenyan isin hiike uuf sirna keenya galateffadhaa jechuun hololuu jalqabani.erganaa isi hojii isaani shira isaani itti barani hojiirra oolchuu jalqabani.gaaffii sabaa cinaatti gataniii ass Deebi’,ani Qerroo maqaa xuressuu ,Qabsaa’ota maqaa xureessuun sirni kalessa nu ajjessaa nu hidhaa bahe deebi’e anatu isiniif qabsaa’ee abbaan jijjiramaa kanaa ana jedhe yelloo tokko male lallabuu jalqabe.harra immo ittuyyu ija jabaatee maqaa sagal jijjirratee sabbonummaa oromoo xiqqeessuuf Gaaffi oromoo ukkaamsuuf Hayyoonni oromoof qerroon aangoof faayidaa barbaadu jedhe qanfii tokko male Ija dhiqate Hayyoota oromoon kalessa yeroo ibiddaa sana kessatti furtuu beekumsaaf muuxannoo nuuf ta’uun hirriba dhabanii aarsaa kaffalaa bahanii kanarratti holola qindessuuf akka sirnaatti turtii aangoo ishee dheressuuf Baajata / qarshii woliif ramadde wolqindeessite gad baate.harras taanaan adeemsi akkanaa nu basa jettanii yaaddu taanaan abdii muradhaa dhaloonni kun dhaloota gochaaf hojii kessan irraanfate akka #harree garaaf jecha Dhugaa saba isaa gurguree buluu miti.Kanuma!